၂၀၁၄ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအတွက် ကျက်နည်း၊ မှတ်နည်း၊ ဖြေဆိုနည်းအနှစ်ချုပ်
Published on Friday, 07 February 2014 08:53
Written by ဆရာမျိုး (ပန်းတိုင်)
၂၀၁၃ ခုနှစ်ကလည်း ကျက်နည်း၊ မှတ်နည်း၊ ဖြေဆိုနည်းကို ကြေးမုံသတင်းစာမှာ ရေးသားခဲ့ပြီးပါပြီ။ အနှစ်ချုပ်လေးမရေးသားမီ ကျောင်းသားလူငယ်တို့အတွက် တစ်ဘဝလုံး လမ်းမှန်ဖို့အတွက် ဘဝနေ ထိုင်နည်းလေးပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ စာရေးသူဟာ ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာ လက်မှတ်ရရှိ ထားသူဖြစ်ပြီး ဘာသာရပ်သင်ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းဖွင့်ထားပြီး အထက်တန်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေမှာ ကွန်ပျူတာပညာရပ်တွေကို လိုက်လံသင်ကြားနေတာ နှစ် (၂၀) လောက်ရှိပါပြီ။ စာရေးသူဟာ အတတ်ပညာတစ်ခုတည်း တတ်မြောက်ထားရင် တစ်ချိန်ချိန်မှာ စားဝတ်နေရေး အခက် အခဲရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ စက်မှုလက်မှုအတတ်ပညာ တော်တော်များများကို လေ့လာလိုက်စား ထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေဟာ ယနေ့လူငယ်နောင်ဝယ်လူကြီးဆိုတဲ့ အတိုင်း နောင်တစ်ချိန်မှာ နိုင်ငံရဲ့တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးကို နိုင်ငံတော်မှလည်း ပညာရေးကိုအဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ကြိုးစားနေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးကို အဆင့်မြှင့် တင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်သားကောင်း၊ သမီးကောင်းတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကလည်း မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အခိုင်မာဆုံးတည်ဆောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအဖို့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုတွေ လျော့နည်းလာပြီဆိုရင် ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်လည်း ပျောက်လာမယ်။ တဖြည်းဖြည်းပျင်းရိလာမယ်။ ဒါကြောင့်
(၁) စိတ်ဓာတ်ကို ကောင်းအောင်ပြင်ပါ။ (Game ဆော့ဖို့၊ သီချင်းနားထောင်ဖို့ထက် ကျောင်းစာကို ဦး စားပေးကျက်ပါ။ ပျင်းရိတဲ့စိတ်ကို စာဖတ်ခြင်းဖြင့် အနိုင်ယူပါ)
(၂) ဗဟုသုတဖြစ်စေမည့် စာပေများကို တစ်နေ့တစ်နာရီ အချိန်ပေးဖတ်ပါ။
(စာပေဗဟုသုတရှိသူဟာ စာပေမဖတ်တဲ့သူထက်စာရင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးတွေမှာ အများ ကြီးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။)
(ဘာသာတရားလိုက်စားသူဟာ ကလေးပင်ဖြစ်သော်လည်း ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်အမူအရာ သုံးပါးစလုံး ယဉ်ကျေးနိုင်ပါတယ်၊ အမှားနည်းပါတယ်)
(ရည်ရွယ်ချက်မရှိသူဟာ တက်ကျိုးနေတဲ့လှေလိုပါပဲ။ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်)
(စားတာ၊ သောက်တာ၊ နေတာ၊ ထိုင်တာ၊ ပြောတာ၊ ဆိုတာကအစ စည်းကမ်းရှိသူဟာ တိုးတက်နိုင် သူဖြစ်တယ်)
(၆) သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကို တတ်နိုင်သလောက် သင်ယူပါ။
(ပညာရပ်တစ်ခုတည်း တတ်မြောက်ထားရင် ခေတ်ပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်။)
"မသိသူကျော်သွား၊ သိသူဖော်စား" အတိုင်း မေးခွန်းအသွားအလာကိုနားလည်ပြီး အမှတ်ပေးစည်း မျဉ်းနဲ့ကိုက်ညီအောင် ဖြေဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင် ညံ့သူအောင်ပြီး တော်သူဂုဏ်ထူးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ ယခုရေးသားလိုက်တဲ့ အနှစ်ချုပ်လေးကတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ဖြေဆိုမယ့်သူ တိုင်းအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ်ဆိုရင် မအားတဲ့ကြားထဲက ရေးသားလိုက်တဲ့စာမူလေးအ တွက် ဝမ်းသာရပါတယ်။ စာရေးသူဟာ ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီး အထူးကုဆရာ ဝန်များ၊ ထူးချွန်အင်ဂျင်နီယာများ၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ သတင်း စာမှာပါတဲ့ ဖြေဆိုနည်းလမ်းညွှန်နဲ့ စာရေးသူရဲ့အတွေ့အကြုံပေါင်းစပ်ပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ မြန်မာစာ-စာရှစ်စာ၊ သဒ္ဒါလေ့ကျင့်ခန်း၊ ခက်ဆစ်(ကဗျာ၊ ရေသည်)၊ ဝါကျ၊ အလင်္ကာ၊ စာစီ စာကုံး) [အမှတ် (၅၀) လောက်နဲ့ အောင်ရင်တော်ပြီဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပါ]။ ဂုဏ်ထူးအတွက်ဆိုရင် အားလုံးကို ခြုံငုံကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာစီစာကုံးကိုတော့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတိုင်း ၄၅ မိနစ် ခန့် အချိန်ပေးဖြေဆိုသင့်ပါတယ်။ အသင့်အတင့်နဲ့ အနည်းဆုံးသုံးမျက်နှာလောက်ဆို ၁၀ မှတ် လောက်ရနိုင်ပါတယ်။
၂။ အင်္ဂလိပ်စာ Units (14) ခုစလုံးကို တစ်နေ့တစ်နာရီ၊ စာတစ်ပိုဒ်ကို ငါးခေါက်လောက်ကြည့်ပြီး ဖတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Poem ကိုတော့ အလွတ်ကျက်ထားရပါမယ်။ မေးခွန်းဟောင်းတွေကို အကြိမ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ထားရပါမယ်။ (၆၅) မှတ်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ Grammar ကတော့ (1) Active Voice/ Passive Voice,(2) Direct and Indirect Speech,(3) After,(4) Without, (5) No Sooner, (6) If/Unless, (7) In Spite of, (8) So..that, (9) Both..and,(10) There is no,(11) Nouns in apposition ပါနိုင်ခြေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာသမားက စာကုိုအကုန်မသင်ဘဲ ရွေးသင်ရင်၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူကစာပိုဒ်များကို ရွေးကြည့်ရင်ကျရှုံးရန်များပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဂုဏ်ထူးလိုချင် ရင် Letter နဲ့ Eassy ကို Owns Writing ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ Punctuate ကို Subject, Verb, Object ခွဲပြီး စကားပြောဟန်ကိုရှာဖွေပါ။ အလွတ်ကျက်လို့မရပါ။ မေးခွန်း No(I) နှင့် No(V) အတွက် Read the passage ဖြေဆိုရာမှာ Active Voice မှ Passive Voice ကိုပြောင်းတတ်ဖို့ လိုအပ်သလို Noun Form နဲ့ Verb From ကိုပြောင်းတက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Read the passage ဖြေဆိုရာမှာ because၊ by+Ving+to+V1 စကားဆက်မှန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စကားဆက်မပါရင် အမှတ်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ စကားဆက် အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(1) What နဲ့မေးရင် စကားဆက်
= that Sub+V
= to+V1 (ရန်)
(2) How နဲ့မေးရင် စကားဆက်
= by+Ving (ခြင်း၊ဖြင့်)
= With+Noun (နှင့်၊ နှင့်အတူ)
= (…ly) adverb (စွာ) e.g.slow,quickly.
(3) Why နဲ့မေးရင် စကားဆက်
= because Sub+V
= for+Ving (အတွက်ကြောင့်)
= because of+Noun (အတွက်ကြောင့်)
(4) Where နဲ့မေးရင်
= PN/PDN/PDAN e.g inabig tree
P D A N
What di….do ကိုမေးခြင်းသည် လုပ်ရပ်ကိုမေးခြင်းအဖြေကို V2 နှင့် ဖြေရမည်။ do နေရာတွင် ထည့် ရမည်ဆိုတဲ့ ပုံစံကိုသိထားသင့်ပါတယ်။
၃။ သင်္ချာကိုဖြေဆိုတဲ့အခါ အခန်း (၁) (f.g)(x)=f(g(x)) လက်သည်းကွင်းတွေကျန်ခဲ့ရင် အမှတ် ဆုံးရှုံးမှာပါ။ အခန်း(၂) Factor ကိုဖြေဆိုတဲ့အခါ let f(x) တည်ရပါမယ်။ (x-2) isafactor of f(x) ပြီးရင် f(2)=0 ဖြစ်ကြောင်းပါမှ အမှတ်ရပါမယ်။ remainder မှာတော့ e.g The remainder=2 အောက်ဆုံးမှာ အဖြေထိုးပေးမှ အမှတ်ပြည့်ရပါမယ်။ အခန်း (၃) Binomial မှာ (r+1)th term of ဆိုတဲ့ စာသားကိုထည့်ပြီး အဆင့်မကျော်ဘဲ တစ်ဆင့်ချင်းတွက်မှ အမှတ်ပြည့်ရပါမယ်။ အခန်း(၄) Inequation အခန်းမှာ graphical method ကို Algebric method နဲ့ဖြေရင် အမှတ်မရပါ။ မေးတဲ့ method ကို သတိထားဖြေရပါမယ်။ graphical method မှာပုံကိုဂရုတစိုက်ဆွဲရပါမယ်။ X,Y ဝင်ရိုးနဲ့ မျဉ်းကွေးကို သတိထားဆွဲရပါမယ်။ Algebric method မှာတော့ (? and ?) or (? and ?), and နဲ့ or နေရာမှန်ရပါမယ်။ လက်သည်းကွင်းတွေကျန်ရင် အမှတ်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ အခန်း(၅) Sequence and Series မှာတော့ ပုံသေနည်းတွေကို အလွတ်ကျက်ပါ။ a=u1 =firsts term, Un=1=last term စတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိမှ ဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အခန်း(၆) Matrix အခန်းမှာတော့ metrix method ကတော့အမေးများပါတယ်။ အခန်း (၇) Probability အခန်းမှာတော့ tree diagram လား၊ table လား ဆိုတာသိရမယ်။ မေးခွန်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို တိတိကျကျ ဘာသာပြန်နိုင်ရပါမယ်။ အခန်း (၈) Circle တွေကိုတော့ ထောင့်တွေ၊ အနားတွေကို ရှာတတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားရပါမယ်။ အခန်း(၉) Vector အခန်းမှာ(၃) မှတ်တန်ကို ဦးစားပေးပါ။
အခန်း (၁၁) Trigo အခန်းမှာ sin,cos,tan,cot,sec,cosec ရဲ့အချိုးတွေကို သိရမယ်။ 30'(1,√3, 1,2), 45'(1,1,√2) ရဲ့အောက်မှာ O,A,H ရှိတယ်ဆိုတာသိရင် Trigos ဟာအလွန်လွယ်ပါ လိမ့်မယ်။ Law of Sine နဲ့ Law of Cosine ကိုလည်း လေ့ကျင့်ထားရပါမယ်။ အခန်း (၁၂) Calculus အခန်းမှာ Lim ပုစ္ဆာမှာတစ်ကြောင်းအောက်ဆင်းတိုင်း Lim ရှေ့မှာ (=) ထည့်ရပါမယ်။ Equation of the tangent and Normal line ကတော့ အမေးများပါတယ်။ [Chapter(1) မှ (7) အောင်မှတ်အ တွက်]၊ [Chapter (1 to 10) အားလုံးကြည့်ရင် ဂုဏ်ထူးထွက်နိုင်ပါတယ်။]
၄။ ရူပဗေဒ Law များကိုသေသေချာချာ တိတိကျကျ ကျက်မှတ်ရမယ်။ ကျက်စာများစာလုံးပေါင်း မှားလျှင် အမှတ်မရနိုင်ပါ။ လျှပ်စစ်ခန်းတွင် Direction များကိုထည့်ပေးရပါမယ်။ ပုံသေနည်းတွေကို အလွတ်ကျက်ထားရပါမယ်။ (P=Power) Unit က (Watt) ဆိုတာသိထားရပါမယ်။ ပုံသေနည်းတွေ ကိုအလွတ်မရရင်တော့ ကျရှုံးဖို့များပါတယ်။ [Chapter(1) မှ Chapter (10) ဆိုရင် အမှတ်ကောင်း ကောင်းနဲ့ အောင်ပါလိမ့်မယ်]။ [(Chapter-14)] ခုစလုံးကြည့်ရင်တော့ ဂုဏ်ထူးမှတ်ကျော်ပါလိမ့် မယ်]။
၅။ ဓာတုဗေဒ Chapter(1) မှ Chapter (7)၊ Law, Laboratory, Extraction, Manufacture (ပုံ/စာ), Titration (ပုစ္ဆာ)၊ အောင်မှတ်ကျော်ပါလိမ့်မယ်။ ဂုဏ်ထူးမှတ်ကျော်ချင်ရင် အကုန်ကြည့်ရပါ မယ်။
၆။ ဇီဝဗေဒ Chapter (5,7,10,12) အတွက် အမှတ် (၆၀) ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ Chapter (1 မှ 5) နဲ့ Chapter (7,10,12) ကြည့်ရင်ဂုဏ်ထူးမှတ်ကျော်ပါလိမ့်မယ်။
၇။ ဘောဂဗေဒ အမှတ် ၆၀ ဝန်းကျင်နဲ့ အောင်ချင်ရင်တော့ အခန်း(၁၊၃၊၅) ကျက်နိုင်ပါတယ်။ ဂုဏ်ထူးလိုချင်ရင်တော့ အခန်း (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅) အကုန်ကြည့်ရပါမယ်။
ဖြေဆိုတဲ့အခါ (၁) မေးခွန်းကိုနားလည်အောင်ဖတ်၊ (၂) မှန်မှန်နှင့်မြန်မြန်ဖြေ၊ (၃) နာရီကိုအပြည့်ဖြေ ပါ။ သူများထွက်တိုင်း လိုက်မထွက်ပါနှင့်၊ ခိုးချဖို့စိတ်ကူးထားတဲ့ ကျောင်းသားက ကျဖို့သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရိုးရိုးသားသားဖြေဆိုပါ။ စ်ိတ်စွမ်းအားကို အမြင့်ဆုံးထားပါ။ အောင်ချင်စိတ်ရှိတဲ့ ကျောင်း သားဟာ အောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဂုဏ်ထူးလိုချင်တဲ့ ကျောင်းသားကတော့ ဂုဏ်ထူးရနိုင်ပါတယ်။ အောင်အောင်ကျကျဆိုတဲ့ ကျောင်းသားကတော့ ကျပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့လူတိုင်းမှာ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဟာ နီးနီးလေးပါ။ ယခုဖော်ပြလိုက်တဲ့ ကျက်နည်း၊ မှတ်နည်း၊ အမှတ်ပေးပုံစံများ ကိုလေ့လာ၍ အားနည်းသူများအောင်မြင်၍ တော်သူများဂုဏ်ထူးရပါစေ။ ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်